आइजिपी को हुने? फैसला भोलि | Suvadin !
सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको अन्तिम फैसला मंगलबार सुनाउने भएको छ। सोमबारै आउने अपेक्षा गरिए पनि फैसला लेख्न समय लाग्ने भएकाले सर्वोच्चले मंगलबारलाई सारेको हो।
Mar 20, 2017 16:48
नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्द।
Shared: 272 times | Share this on
काठमाडौं, चैत ७ - सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको अन्तिम फैसला मंगलबार सुनाउने भएको छ। सोमबारै आउने अपेक्षा गरिए पनि फैसला लेख्न समय लाग्ने भएकाले सर्वोच्चले मंगलबारलाई सारेको हो।
मंगलबार ११ बजेसम्ममा फैसला आइसक्ने अनुमान गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई फागुन १ गते प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति निर्णय गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले चन्दविरूद्ध परेको निवेदनउपर अन्तिम सुनुवाइ सोमबार सकिएको हो।
चन्दको बढुवाअगावै परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तीनपटकसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश गरेको थियो।
आइतबारबाट प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले यो मुद्दा हेरिरहेको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको भन्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले निवेदन दिएका थिए। त्यसैगरी, चन्दको नियुक्ति बदर गरी आफूलाई महानिरीक्षक बनाइपाऊँ भन्दै डिआइजी नवराज सिलवालले निवेदन दिएका थिए।
बढुवामा वरियता क्रममा पहिलो नम्बरमा डिआइजी सिलवाल थिए। दोस्रो नम्बरमा रहेका प्रकाश अर्यालसमेतलाई छोडेर सरकारले तेस्रो वरियताका चन्दलाई नियुक्ति गरेको थियो।
आइतबार निवेदकतर्फबाट बहस सकिएको थियो। सोमबार दुई सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा बहस गरे। तर, विपक्षी कानुन व्यवसायीले प्रतिरक्षा बहस गरेनन्। चन्दको पक्षमा वकालतनामा हालेका कानुन व्यवसायीले बहस गरेनन्।